Ka shaqaynta deegaanka ee caafimaadka iyo fayo-qabka dadka
Posted by Tranquillus | Jan 10, 2022 | Shabakada
si loo ogaado go'aaminta caafimaadka, kabaannada waxqabadka dadweynaha ee caafimaadka, sinnaan la'aanta bulsho iyo dhuleed ee caafimaadka iyo ugu dambeyntii dhibaatooyinka waaweyn ee caafimaadka maanta.
in la beegsado xeerarka aasaasiga ah ee xagga nadaafadda, tallaalka, caafimaadka, cuntada ama xitaa dhaqdhaqaaqa ciyaaraha,
ogow saameynta ay ku leeyihiin nolosha, jirka iyo deegaanka bulshada ee mid kasta oo naga mid ah
Dhammaanteen waxaa na saameeya arrimaha caafimaadka.
Heer qaran iyo heer deegaan, siyaasado badan ayaa la hirgeliyay si wax looga qabto arrimo isku mar ah dad-koob, cudur-faafiyeed iyo bulsho U ogolow qof walba inuu ku noolaado caafimaad wanaagsan ilaa inta suurtogalka ah.
Habka ficilku aad ayuu u kala duwan yahay, gaar ahaan marka la eego ka hortagga iyo horumarinta caafimaadka.
Tayada hawada, nafaqeynta, nadaafadda, dhaqdhaqaaqa jirka, xaaladaha shaqada, xiriirka bulshada, helitaanka daryeel tayo leh ayaa dhammaantood ah arrimaha gacan ka geysta xaalad caafimaad oo guud oo wanaagsan.
Mawduucyadan kala duwan waxaa looga hadli doonaa saddex qaybood. Waxaan ku dadaali doonaa inaan qeexno siyaasadaha qaranka annagoo ku tusaalayna tusaalayaal ku saabsan dhulalka.
Ka shaqaynta deegaanka ee caafimaadka iyo fayo-qabka dadka Janaayo 17th, 2022Tranquillus
READ Aasaaska Google Sheets
horeMusuq-maasuqa, eexda, wax-is-daba-marinta...sida looga hortagi karo maamulka deegaanka?
socdaAasaaska waxqabadka bulshada
Hawlgabka horumarka leh ayaa la kordhiyey shaqaalaha maalin go'an
5 Hacks si loogu kasbado Macaamiisha YouTube-ka
Kaalmada loo-shaqeeyaha ee cilmi-baarista iyo hirgelinta xalalka haynta shaqada ee shaqaalaha naafada ah
Sidee loo bilaabaa ganacsi khadka tooska ah lagu sameeyaa oo lagu kasbadaa?